Nezvedu - Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd.
Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd. rakaumbwa muna 2006, iri nyanzvi R & D, kugadzirwa uye rokutengesa mune kuchengeteka indasitiri. Isu tinopa ese maratidziro eCCTV zvigadzirwa zvevatengi vepasirese, kusanganisira Smart Face Detections / Chiso IDH. 265 NVR renji, Smart IP Kamera, Smart 5 IN 1 XVR, nyanzvi uye highperformance HD Makamera, WiFi Makamera uye WiFi NVR Kits, 4G / Wifi Solar Camera . Seimwe yevatungamiriri vanogadzira muChina, Aopvision yakazvipira kupa yakakwirira kirasi tekinoroji, mhando chigadzirwa, uye basa rehunyanzvi.
Aopvision ine muunganidzwa weR & D matarenda, uye yakashandisa makore echiitiko ekuchengetedza indasitiri muChina. Pamusoro peizvi zvinogadzira Aopvision yepamusoro-tekinoroji chikuva. Kambani inotora yepamusoro bhizinesi manejimendi sisitimu uye yemazuva ano OA system, uye inoumba matatu-mu-mumwe kuonda yekugadzira modhi neTQC, TPS uye TPM.
Aopvision inonyatso shandisa QC manejimendi yekushanda kwebasa uye mutengo pasi zvakare. Naizvozvo, Tine ISO2008 International Hunhu Chitupa uye ISO14001 International Nharaunda Management Chitupa; uyezve, edu akateedzana zvigadzirwa anotenderwa neRoHS, CE uye FCC zvitupa, zvinopa vatengi mhando uye zvemakwikwi zvigadzirwa uye yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi.
Zvigadzirwa zveAopvision zvinoshandiswa zvakanyanya mumabhizinesi, zvivakwa zvinehungwaru, mahotera & kumisika, uye dzimba dzekugara nezvimwe parizvino, zvigadzirwa zvedu zvakave zvichizivikanwa muAmerica, Canada, Japan, Britain, Germany nedzimwe nyika nematunhu.
Aopvision inosimbirira pane pfungwa yeakajairika uye anowirirana budiriro, uye anozvipira kuita kuti hupenyu hwevanhu huve nerunyararo uye hwakachengeteka pasi rese.
"Zvakachengeteka zvakanyanya, Zvakangwara", iri ndiro basa redu!
Aopvision ichaenderera mberi kusimudzira mweya webhizinesi we "Professionalization Dedication Concentration", icharamba ichivandudza, ichiongorora uye ichigadzira pamunda wekutarisa vhidhiyo, kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinodhura, uye kugadzira kukosha kukuru kwevatengi.
Management Concept: Isu tinoteerera kune "musika kutanga, mutengi kutanga", musika-yakanangana uye vatengi kudiwa sekukosha manejimendi pfungwa.Tanga tichishanda nesimba tichigara tichisanganisa chigadzirwa uye kugadzirisa basa redu. Tagara tinemi nguva dzose.
Hunhu Sisitimu: Isu tinogadza upproduction nzvimbo nenzvimbo dzemhando yepamusoro, tinogadza yakasimba yemhando yekudzivirira system. Zvese zvigadzirwa zvinogadzirwa zvakaomarara kuvimbika kuyedzwa uye nharaunda kunonoka kusati kwatumirwa. Isu tinoshandisa zvizere iyo ISO9001: 2015 yemhando yekutarisira sisitimu uye kuwana chitupa.
Zvakatipoteredza Sisitimu: Isu takawana ISO14001 chitupa, kuona kuti kambani haina adetrimental mhedzisiro.Takatora ROHS certification, zvese zvigadzirwa zvedu uye zvigadzirwa zvigadzirwa zvinogadzirwa kuROHS zviyero.
1-Panasonic yekumberi NPM SMT Line, yakakwira Speed, pamwe neYamaha SMT LINE
2-Seta Yakakwira-Kupisa Auto Mhepo-Inoyerera
3-Line Gungano Mutsetse
4-Boka R & D timu yekubvisa munhu makumi mashanu
Mwedzi wega wega Qty Kugona: 200K emaKamera, 30K-50K eDVR / NVR